HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ourdou Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Xhosa Zoloa Éwé
Roa volana eo ho eo ilay sakadia no mitondra vohoka, ary telo ny zanany amin’ny ankapobeny
EFA maizim-be ny andro any amin’ilay tany efitra. Iny fa mivoaka avy ao anaty lavaka ny sakadia iray ary mijanona kely. Mijerijery ny manodidina sy mihainohaino izy, mandady moramora, ary manomboka mihaza manerana an’ilay tany efitra be fasika.
Tampoka eo dia mitsambikina misambotra voalavodia iray mbola variana ilay sakadia. Mihaza mandritra ny alina izy, ka mitsambikina tsindraindray mba hisambotra ny hazany. Totofany amin’ny fasika izay haza tsy laniny. Miverina any an-davaka izy raha vao mangiran-dratsy, ary mahalana vao hita amin’ny antoandro. Diniho ny lafiny mampiavaka an’io sakadia tsy fahita firy io.
Matsilo sofina ilay sakadia ka fantany ny misy ny hazany, na dia any ambanin’ny tany aza
Mimeomeo mafy izy rehefa mitady vady. Iny feony maranitra iny no ren’ny sakadia vavy, na dia avy lavitra aza
Miaro an’ilay sakadia tsy hilentika any anaty fasika ny volo amin’ny faladiany sady miaro azy amin’ny fasika mahamay na mangatsiaka be
Feno volo fotsifotsy matevina ny atisofiny. Miaro azy amin’ny fasika tsofin’ny rivotra izany
Sarotra arahina ny dian’io sakadia io satria rakotra volo matevina ny faladiany, ka zara raha tazana ny dian-tongony
Ny rano avy amin’ny hazany dia efa mahavelona azy
Mety hahatratra 80 degre ny hafanan’ny fasika any an-tany efitr’i Karakoum. Mety hidina 25 degre ambanin’ny zero koa anefa ny mari-pana
Aiza no mety hahitana an’io sakadia io? Any an-tany efitr’i Sahara, manerana an’i Arabia, ary any amin’ny faritra sasany any Azia Afovoany
Lanjany: Milanja roa ka hatramin’ny telo kilao ny lahy
Halavany: 40 ka hatramin’ny 57 santimetatra
Rambony: 20 ka hatramin’ny 30 santimetatra
Toetoetrany: Malemy paika raha ampitahaina amin’ny sakadia hafa, izay matetika no masiaka
Hizara Hizara Ilay Sakadia Tsy Fahita Firy